ဂုဏ်ကြီးရှင်တွေ အတွက် ~ အလွမ်း မင်းသားလေး
အလွမ်း မင်းသားလေး မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။ အချိန်ပေး အလည်လာရောက်သော သူငယ်ချင်းများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
08:35 စိုင်းလင်းထက် No comments
ငါ့ ဘ၀ကို တဖြုတ်ဖြုတ်တက်လို့
ဗယုတ် ကျ ဘ၀မှာ
ပလုတ် တုပ် လို
မဟုတ် တရုတ်လည်း ငါရေးတတ်တယ်
ရုပ် ရုပ် သဲသဲ
ရှုပ် ရှုပ် ရှဲရှဲလည်း
ကလေး ချင်း ကတ်
ငါ့ မြင်း ဘယ် စိုင်းစိုင်း
နောက်ဆုံးတော့ သင်းချိုင်းပဲ ရောက်ကြတာပါပဲဗျာ
ကဲ ... ဂုဏ်ကြီးရှင်တွေ လမ်းရွေးကြပါ...
Posted in: ကဗျာ
အလွမ်းမင်းသားလေး ဆိုဒ်ကို လာရောက် လည်ပတ်ကြသော သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီဆိုဒ်လေးကို ပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကတော့ ကျွန်တော် လိုချင်တာလေး တွေရှိရင် အလွယ်တကူရယူနိုင်ရန်နှင့် ကျွန်တော်၏ ဆိုဒ်လေးမှာ သူငယ်ချင်းတို့အတွက် ရယ်စရာလေးတွေ ပျော်ရွင်စရာလေးတွေ သတင်းအစုံ အလင်များစွာကို တင်ပေးထားပါတယ်။ ကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း ရောက်မှတော့ ဖတ်၊ ကြည့်သွားပေါ့ဗျာ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအား အထူးပင် ကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း ♥♥♥
♫♪♫ Online Radio Malaysia ♫♪♫
ဒီအချိန် ဖြစ်နေပီဂျာ ...
အမှတ်တရ ရေးပေးခဲ့နော် ...
သားသားကို မထိရဘူးနာ် ...
Software (2) ကဗျာ (8) ချစ်သူအတွက် (15) စာပေ (1) ဆက်သွယ်ရန် (1) ဓာတ်ပုံ (11) နည်းပညာ (1) မှတ်တမ်း (3) မိတ်ဆက် (2) မလေးရှား (16) လစဉ်ဗေဒင် (3) ဝထ္တုတို (2) သီချင်း (2) သူငယ်ချင်းအတွက် (2) အင်တာဗျူး (7)
တမ်း တ လျှက် ပါ အ မေ ....
အမေ မလေးရှားရဲ့မီးရောင် ညတွေထဲ သား မပျော်ရွှင်ချင်တော့ဘူး အမေ ကျေးလက်ရဲ့အမေ့အိမ်က ဖယောင်းတိုင်ငယ် မီးရောင်ည...
ကောင်မလေး.... တစ်ဖက်သတ်အချစ်..ဆိုတာ ဘယ်တော့များမှ...ဖြစ်ထွန်းမှာလဲ? နှလုံးသားနဲ့ရင်းပြီး... ရင်နဲ့အပြည့်ချစ်ခဲ့ရတဲ့အချစ်တွေအတွက်....
☺☺☺ ဒီလ ကံမကောင်းပါလားနော်☺☺☺(ဝထ္တုတို)
သူငယ်ချင်းများ အားလုံးမင်္ဂလာပါ ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းလေးကို ရေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အမိမြေနဲ့ ဝေကွာပြီး နေ နေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့လို မလေးရှားရော...
ကာ ရံ မဲ့ ခဲ့ တဲ့ အ လွမ်း
သံစဉ်တွေတွေ နိုးတစ်ဝက်နဲ့ အမှောင်လွှမ်းခဲ့တဲ့ည ကဗျာတွေကာရံ မထပ်ပေမဲ့ အလွမ်းတွေ လိုင်းပေါ် တက်ခဲ့တာ ချစ်သူ နင်သိပါ့မလား ? ရင်ခုန်သံတဲ့ ...
မလေးရှားနိုင်ငံ စမုံညှင်းစေတီ ထီးတော်တင် မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ
8.1.2012 တနင်္ဂနွေနေ့ မလေးရှားနိုင်ငံ စမုံညှင်း အရပ် ဒေသတွင် ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပုံတူ စေတီတော် ထီးတော်တင်ပွဲ မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို အွန်လိုင်းမှ ဗုဒ...
သံစဉ်တွေ ရှိနေပေမယ့် ဂစ်တာလေးက ကြိုးပြတ်ပြီလေ အိမ်မက်တွေ ရှိနေပေမယ့် ရောင်နီတွေ သမ်းလာပြီ ဝေးကွာခြင်းတွေ ရှိနေလဲ တမ်းတခြင်း တွေငိုကြေ...
မလေးရှားနိုင်ငံ ပီနန်မြို့မှ သုခကာရီ ပရဟိတ အသင်းလေး နှင့် အင်တာဗျူး အစီအစဉ်
အဝေးရောက် မလေးမြေမှာ အလုပ် လုပ်ကိုင်ရင်း တစ်ဖက်က ပရဟိတ ကိစ္စလေးတွေ တစ်ဖက် တစ်လမ်းက အားတက်သရော လုပ်ဆောင်နေပြီး လူငယ်အသင်းလေး တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ မ...
သ တိ ရ ပေး ပါ ...
ည ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက် တ်ိတ်တိတ်လေး လွမ်းရအောင် စီစဉ်ထား လေသလား ... မျက်ရည်ကျပြီး လွမ်းရတာထက် ရင်ထဲမှာပဲ ဘယ်သူမှ မမြင်အောင် ငိုရတာ...
လို ချင် တာ ရှာ ကြည့် ရန် ။
အလွမ်း မင်းသားလေး - စိုင်းလင်းထက်
အလွမ်းမင်းသားလေး ဝက်ဆိုက်အား 29.10.2011 နေ့လေးတွင် စတင် ဖွင့်လှစ် ပါသည်။